I-China Exquisite professional brush ibhulashi 13pcs isikhumba esinobunono bezimbuzi izinwele zokwenziwa ngebrashi ngesibambo sokhuni Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
Ibhulashi le-makeup elicokeme le-13pcs elihlanzekile lesikhumba elinobungani bezimbuzi ngesibambo sokhuni
Igama lomkhiqizo Ibhulashi le-makeup elicokeme le-13pcs elihlanzekile lesikhumba elinobungani bezimbuzi ngesibambo sokhuni
Izinto Izinwele zokwenziwa + isibambo sokhuni + i-aluminium ferrule
Umbala Okumnyama, okubomvana, onsundu noma okwenziwe ngezifiso
Ilogo Dongshen noma ngezifiso
Iphakheji 1set ebhokisini eliyindilinga noma esikhwameni se-PU, bese ama-200sets esebhokisini
Isikhathi sesampula 5-7days, izidingo ngezifiso 15-20days
Isikhathi sokukhiqiza Kuya ngobungako bakho, ngaphansi kwama-2000sets adinga izinsuku eziyi-15-20, Ngaphezu kwama-2000sets cishe angama-20-35days
Imibandela yokukhokha 30% idiphozi, ibhalansi ngaphambi kokuthumela
Izindlela Zokukhokha T / T, inyunyana yaseNtshonalanga, L / C.
Izinzuzo zethu Intengo yefektri yokuncintisana + insizakalo ye-professtional + ikhwalithi enhle
- Ikhwalithi entsha sha nekhulu engu-100%.
- Amabhulashi aphelele okwenziwa: Ibhulashi lesisekelo, Ibhulashi le-Concealer, i-Eyeshadow Brush, i-Eyebrow Brush, i-Blush Brush, i-Lip Brush, i-Mascara Brush.
- Yamukela izinwele zezilwane ezisezingeni eliphakeme nezinwele zokwenziwa ezinikeza amandla amahle kakhulu okubamba impuphu, ithambe futhi ijabulise isikhumba sakho.
- Izinwele zezimbuzi ezisezingeni eliphakeme: Ukuthinta okuthambile, umoya opholile, kukhishwa ngokulinganayo, kufanelana ngokwemvelo, kudala izimonyo. It is kabanzi blush shayela, okuxekethile powder ibhulashi, ukukhanda ibhulashi nezinye izimonyo emabhulashini.
- Isikhwama sesikhumba esithambile esihle, okulula ukusiqoqa futhi uphathe amabhulashi.
- Okubalulekile hhayi kochwepheshe kuphela kepha nakubasebenzisi be-DIY.
- Ibhulashi lekhwalithi yobungcweti elihlanganisa zonke izisekelo ozidingayo kuzinhlelo zokusebenza zansuku zonke.
- Izinwele zokwenziwa ngokwemvelo: Izinwele ezithambile nezintekenteke, ama-bristles aphezulu kakhulu. Isikhumba-friendly futhi esithambile, ngisho makeup. Awekho amamaki wokuxubha, akukho powder. Izinto zokusetshenziswa zingeniswa kusuka kumkhiqizo we-BASF waseJalimane.
Q: Ingabe uyinkampani yokwakha noma yokuhweba?
A: Singabantu abakhiqizi abasezingeni eliphakeme eChina, sinesipiliyoni seminyaka engama-35 sokukhiqiza.
Q: Ngicela i-oda lesampula?
A: Yebo, singathanda ukukunikeza isampula yamahhala uma sinokugcina. Ukuze uthole isampula ebuyekeziwe, kuthatha izinsuku ezingu-7-10 ukuqedwa.
Q: Ngingayithola nini intengo?
A: Singakwazi ngokuvamile ngaphakathi kwamahora angama-24 sizokuthumela uhlu lwezingcaphuno.
Q: Ingabe ukuphrinta kwe-logo kumahhala?
A: Ilogo yamahhala yamukelekile uma ubuningi bakho bufinyelela i-MOQ.
- Ikhwalithi entsha sha engu-100% nekhwalithi ephezulu.
- Ingqikithi amabhulashi ezimonyo: Ibhulashi Lesisekelo, Ibhulashi Elifihlekile, Ibhulashi le-Eyeshadow, Ibhulashi le-Ishiya, Ibhulashi le-Blush, i-Lip Brush, i-Mascara Brush.
- Yamukela izinwele zezilwane ezisezingeni eliphakeme futhi izinwele zokwenziwa ezinikeza amandla amahle kakhulu okubamba impuphu, ithambe futhi ijabulise isikhumba sakho.
- Uboya bezimbuzi ezisezingeni eliphakeme: Sukuthinta kaningi, umoya omusha, riphakamisa ngokulinganayo, kufanelana ngokwemvelo, cIlinganisela izimonyo. It is kabanzi blush shayela, okuxekethile powder ibhulashi, ukukhanda ibhulashi nezinye izimonyo emabhulashini.
- A ibhulashi lekhwalithi yobungcweti elihlanganisa zonke izisekelo ozidingayo kuzinhlelo zokusebenza zansuku zonke.
- Izinwele zokwenziwa ngokwemvelo: Sizinwele ezivame futhi ezintekenteke, ama-bristles aphezulu kakhulu. Senobungane futhi ethambile, ngisho nokwenza izimonyo. No amamaki okuxubha, akunampuphu. Izinto zokusetshenziswa zingeniswa kusuka kumkhiqizo we-BASF waseJalimane.
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu yobungcweti bebrashi engu-12pcs fiber yokwenziwa izinwele zethusi i-ferrule isibambo esimnyama sebhulashi leseti
Olandelayo: I-Eco-friendly izinga eliphakeme lesibambo sokhuni i-fiber synthetic wool 5pcs makeup brush set
I-Best Makeup Brush Setha
Ibhulashi Makeup Kusha
Ifektri Yokwenza Ibhulashi
I-Makeup Brushes Factory Ilogo
Amaminerali Wokwenza Ibhulashi
I-Private Label Brushes Makeup
Ilebuli yangasese ye-Makeup Brushes
Classic black 16pcs professional isibambo ngokhuni ...
I-Dongshen Kabuki shayela ilebula yangasese ngokunethezeka natu ...
Ilebheli yangasese yokwenza ibhulashi isetha isiliva elihamba lonke ...
Scratch powder strong vegan synthetic hair 12pc ...
Dongshen ngezifiso ilebula yangasese super zemvelo ...
Ithuluzi Brushes Brushes, isethi yokwenza ibhulashi, Ukugunda Izinwele, Ukushefa Setha, Setha i-Makeup Brushes, Yenza amabhulashi,